Ch 15 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 15 Luke
15:1 Ary ny mpamory hetra sy ny mpanota no manakaiky azy, ka mba hihaino Azy.
15:2 Ary ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna dia nimonomonona, nanao hoe:, "Ity no mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy."
15:3 Dia nilaza izao fanoharana taminy, nanao hoe::
15:4 "Iza moa no olona eo aminareo, izay manana ondry zato, Ary raha namoy ny iray tamin'izy ireo, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay iray izay efa very, mandra-pahitany azy?
15:5 Ary raha hitany iny, izy dia mametraka eo an-tsorony, faly.
15:6 Ary niverina an-trano, dia mamory ny sakaizany sy ny namany, ka nanao taminy: 'Miarahaba ahy! Fa efa hitako ny ondriko, izay efa very. '
15:7 Lazaiko aminareo, fa hisy fifaliana toy izany bebe kokoa any an-danitra ny amin'ny mpanota iray mibebaka, noho ny sivy amby sivi-folo fotsiny, izay tsy mila mibebaka.
15:8 Ary iza moa no vehivavy, manana drakma folo, raha toa izy ka efa very ny anankiray drachma, no tsy mampirehitra jiro, sy hamafa trano, ary fatratra hikaroka mandra-pahitany azy?
15:9 Ary raha hitany iny, dia mamory ny sakaizany sy ny namany, nanao hoe:: 'Miaraha mifaly amiko! Fa efa hitako ny drachma, izay efa very. '
15:10 Ka lazaiko aminareo, hisy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray na dia izay mibebaka. "
15:11 Ary hoy izy:: "Nisy lehilahy anankiray nanan-janaka roa lahy.
15:12 Ary ny zandriny tamin hoy ny Ray, 'Ray, omeo ahy ny anjara-ny toetray, izay ho any amiko. 'Dia nozarazarainy ny fananana eo aminy.
15:13 Ary rehefa afaka andro, ny zandriny, manangona izany rehetra izany miaraka, niainga tamin'ny lavitra ny faritra lavitra. ary, dia dissipated ny fananany, nanaram-po fatratra.
15:14 Ary rehefa levona izany rehetra izany, Nisy mosary amin'izany faritra, ary izy no voalohany izay tonga sahirana.
15:15 Dia nandeha izy ka ampiarahina ny tenany ho iray amin'ireo olom-pirenena izany faritra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-toeram-piompiana, mba hanome sakafo ny kisoa.
15:16 Ary naniry mba hameno ny kibony tamin'ny Manary izay nihinana ny kisoa. Nefa tsy nisy nanome hanina azy izany.
15:17 Ary niverina ny saina, hoy izy:: 'Ahoana no maro ny olona karamain'ny tanana ao an-tranon'ny raiko manan-kanina be dia be, raha izaho kosa maty mosary eto amin'ny!
15:18 Hitsangana aho ka hody any amin'ny raiko, ary dia holazaiko aminy: Ray, Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao.
15:19 Ka izaho tsy miendrika hatao hoe zanakao. Ampahafantaro ahy ny iray amin'ireo mpikarama tanana. '
15:20 Ary nitsangana, dia nankany amin-drainy. Fa raha mbola eny lavitra eny, dia tazan-drainy, ary onena, ka nihazakazaka nanatona, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy.
15:21 Ary ilay zanany nanao taminy: 'Ray, Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao. Ankehitriny dia tsy miendrika hatao hoe zanakao. '
15:22 Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny: 'Vetivety! Hamoaka ny tsara indrindra akanjo lava, ka ampiakanjoy azy izany. Ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony.
15:23 Ary ento ny zanak'omby nafahy eto, dia hamono azy. Ary aoka isika hihinana sy hanao andro firavoravoana.
15:24 Fa ity zanako ity efa maty, ary efa indray; dia very, fa hita indray. 'Ary nanomboka fanasam.
15:25 Fa ny zanany lahimatoa tany an-tsaha. Ary nony niverina indray Izy ka mby teo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy.
15:26 Ary niantso ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny, ary izy nanontany azy toy ny izay anton'izany zavatra izany.
15:27 Ary hoy izy taminy:: 'Ny rahalahinao niverina, ary ny rainao no namono ny zanak'omby nafahy, satria efa nandray azy soa aman-tsara. '
15:28 Avy eo dia tezitra, ary izy dia vonona ny hiditra. Noho izany, ny rainy, mandeha mivoaka, nanomboka niangavy taminy.
15:29 Ary ho setrin'ny, dia hoy izy tamin'ny rainy: 'Indro, Izaho efa nanompo anao noho ny taona maro. Ary izaho tsy mbola nandika ny didy. Kanefa, ianao tsy mbola nomenao Ahy na dia zanak'osy, ka mba hivoky amin'ny sakaizako.
15:30 Nefa nony afaka izany, zanak'i anao niverina, izay efa nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga, efa namono ny zanak'omby nafahy ho azy. '
15:31 Fa hoy izy taminy:: 'Zanaka, ianao no eo anilako foana, ary izay rehetra ananako dia anao.
15:32 Saingy ilaina ny mihinana sy hifaly. Ary noho izany rahalahin'i anao maty, ary efa indray; dia very, fa hita indray. ' "
Oktobra 12, 2019
Oktobra 10, 2019